patient – Healthy Life Journal
ထူးထူးခြားခြား ကြုံတွေ့ရသည့် လိပ်ခေါင်းလူနာများ
—–၊ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဆရာ့အတွေ့အကြုံအရ လိပ်ခေါင်းရောဂါဖြစ်တဲ့ လူနာတွေထဲက ထူးထူးခြားခြားရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး။ A. လိပ်ခေါင်းဖြစ်ရင် ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူလိုက်ရင် ကောင်းသွားတာပါပဲ။ ဒါကို သက်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့...
ကိုထက် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ဒေါက်တာဇန်ဟောင်အမည်ရှိ တရုတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးက တရုတ်နိုင်ငံကနေ နယူးယော့ခ်ကို ပျံသန်းနေတဲ့ China Southern Airline လေယာဉ်ပေါ်မှာ ခရီးသည်တစ်ဦးရဲ့ ဆီးတွေကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်ကာ အသက်ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်စတင်ပျံသန်းချိန်မှာ ခရီးသည်တွေက အဆင်ပြေပြေရှိခဲ့ပေမယ့်...
ဆရာဝန်များက လူနာတိုင်းကို သိစေလိုသည့် အချက် ခုနစ်ချက်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆရာဝန်တွေက အလုပ်များတဲ့အတွက် လူနာတိုင်းကိုလိုက်ပြီး မရှင်းပြနိုင်တာကြောင့် သူတို့ပြောလိုတဲ့ အချက်တိုင်း သင့်ကိုပြောပြဖို့ အားချင်မှအားပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကို မှန်မှန်လုပ်ပါ၊ အစားအသောက်ဆင်ခြင်စားပါ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့၊ အရက်ကိုတတ်နိုင်သမျှ လျှော့သောက်ပါစတဲ့ စကားတွေကတော့မပြောလည်း သင်သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီအချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူနာတိုင်းကို အသေးစိတ်သိစေလိုတဲ့အချက်တွေကို...
ဆရာဝန်စမ်းတဲ့အခါမျက်လုံးကြည့်တာဘာကြောင့်လဲ. . .
မေး ။ဖျားနာတဲ့သူကို ဘာကြောင့် မျက်လုံးကြည့်ကြတာလဲ။ သိချင်လို့ပြောပြပေးပါ။ Thuzar Aung (Fb) ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၊ တာဝန်ခံ) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ဖျားတာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူနာတွေကို စမ်းတဲ့အခါ မျက်စိကြည့်တာက သွေးအားနည်းရောဂါ...
အိမ်မှ ထမင်း၊ဟင်းပို့ရန် ခက်ခဲသူလူနာတို့အား ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ (ရန်ကုန်) မှ နံနက်၊ ည အာဟာရ နေ့စဉ်ကျွေး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ (ရန်ကုန်) တွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေသူ လူနာများအနက် အိမ်မှထမင်း၊ ဟင်းပို့ရန် အခက်အခဲရှိသူ ၁၀ဝ ဦးကျော်အား ဆေးရုံက နံနက်၊ ည ထမင်း၊ ဟင်းနှစ်နပ်ကို နေ့စဉ်ကျွေးလျက်ရှိကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ပပက...
ဆရာဝန် စောင့်ဆိုင်းနေရချိန် စိတ်သက်သာရာရစေဖို့ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ
ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ယာဉ်ကြောထူထပ်တာ၊ နာမည်ကြီး ဆရာဝန်တွေဆီမှာပဲ လူနာတွေက အလုအယက်ပြချင်တာ၊ ဆရာဝန်က မအားလပ်တာစတဲ့ အကြောင်းရင်းမျိုးစုံကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေကို သွားကြည့်လိုက်ရင် ဆရာဝန် အခန်းအသီးသီးရှေ့မှာ လူနာအများအပြား စောင့်ဆိုင်းနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလို စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ ကြာချိန်အတွက် တချို့လူနာက...